यस्तो छ उत्तर कोरियाको अमेरिका माथि हमलाको रणनीति - Edolakha
यस्तो छ उत्तर कोरियाको अमेरिका माथि हमलाको रणनीति
4 years ago/Thursday, August 31st, 2017
जोनाथन मार्कस ।
आणविक हतियारको जवाफ
तर, यसपटक फेरि उत्तर कोरियालाई लिएर सोही प्रश्न सामना गरिँदै छ कि उत्तर कोरियाद्वारा ब्यालेस्टिक मिसाइल र आणविक हतियारलाई लिएर उसको तीव्र जवाफ के हुनेछ ? साथै, यो पनि प्रश्न कायमै रहनेछ कि यदि प्योङयाङले यी कार्यक्रमलाई रोक्न र ऊ आफ्नो निसानामा अमेरिकालाई सामेल गर्न सफल भयो भने के अमेरिका र सिंगो विश्व आणविक हतियारबाट सम्पन्न उत्तर कोरियालाई झेल्न सक्छ त ?
आणविक अप्रसार सन्धि
यसपछि आणविक हतियारको प्रसारलाई रोक्न सुरु गरिएको प्रयास पनि उल्लेखनीय रूपमा सफल रह्यो । १९७० मा अस्तित्वमा आएको आणविक अप्रसार सन्धिले पनि यसमा पर्याप्त योगदान दिएको छ । यस सन्धिको माध्यमबाट आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक र जसको साथमा यस्ता हतियार छैनन्, उनीहरूले आणविक अप्रसारलाई लिएर सहमति जनाएका छन् । सहमतिअनुसार आणविक हतियारसम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्ना हतियारमा कमी ल्याउनुपर्ने थियो र गैरआणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्रले आणविक हतियार नपाउने सर्तमा मात्र यो प्रविधि हासिल गर्नु थियो ।
उत्तर कोरिया पनि भारत–पाक श्रेणीमा
यस्तो अवस्थामा के उत्तर कोरिया पनि इजरायल, भारत र पाकिस्तानको श्रेणीमा पर्छ ? व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने उत्तर कोरिया आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो । यद्यपि, अमेरिकी सहरलाई निसाना बनाउन सक्ने उसको क्षमतामाथि अझै सन्देह छ ।
के अमेरिका र उत्तर कोरिया एकसाथ रहलान् ?
यस्तो तनावबीच अमेरिका र उत्तर कोरिया आणविक ‘शत्रु’ का रूपमा एकसाथ रहन सक्लान् त ? के प्योङयाङको तुलनामा अमेरिकाको आणविक हतियारको आक्रमण बढी घातक होला ? यस प्रश्नको जवाफ दिँदै अनुभवी अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषक टोनी कार्डस्म्यान भन्छन्— मिसाइल परीक्षण गर्नु र त्यसपछि मिसाइललाई परिचालन गर्नु एउटा लामो प्रक्रिया हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई उत्तर कोरियाप्रतिका आफ्ना उद्देश्यलाई लिएर पछि हट्न आग्रह गरेका छन् । यसको मिश्रित परिणाम रहेको छ । किनकि, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उत्तर कोरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई चीनले समर्थन पनि गर्छ । जब कि उसको उत्तर कोरियासितको सम्बन्ध पनि ठिकठाक छ ।
सबैभन्दा अहम् विषय यो हो कि चीन उत्तर कोरियाली शासन सत्ताको अन्त्य होस् र करोडौँ शरणार्थी उसको सीमा पार गरेर आफ्नो देशमा आऊन् भन्ने चाहँदैन । उत्तर कोरियाली शासनलाई लिएर कैयौँ विश्लेषकहरूको तर्क छ कि ऊ यति मूर्ख छैन, जति देखिन्छ । ऊ जे चाहन्छ, त्यसको पछाडि तर्क हुन्छ ।
(मार्कस बिबिसीका कूटनीतिक संवाददाता हुन्) नयाँ पत्रिका दैनिकवाट ।
१५ भदौ २०७४ । ६ः४५ बजे प्रकाशित
VIEWS: 5825 पटक हेरीएको